Subaru neMLS Nhabvu Chikwata Inotambira Nyowani Gadzira Zuva rembwa Fest
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Subaru neMLS Nhabvu Chikwata Inotambira Nyowani Gadzira Zuva rembwa Fest
Subaru yeAmerica, Inc. nhasi yakazivisa kuti mukubatana nePhiladelphia Union, iyo automaker ichaita chiitiko ichi neSvondo, Gumiguru 24, yakatsaurirwa kupa imbwa munzvimbo huru yePhiladelphia zuva rakanakisa rehupenyu hwavo.
Yakadaidzwa kuti "Ita Zuva reImbwa Fest," chiitiko chezuva rose chinokoka vanoda imbwa, varidzi vembwa uye masangano emunharaunda ezvipfuyo kuSubaru Park, kumba kwePhiladelphia Union, kuzopemberera shamwari dzavo dzine furo. Kune avo vari kutsvaga kuenda kumba neshamwari yavo ine furry, Ita Imbwa's Day Fest ichasanganisira imbwa yekurera fair fair mukubatana nemasangano emunharaunda. Vashanyi vanogona kusangana nembwa dzinopfuura zana dziripo dzekurerwa nadzo* uye kana vachida kupa imba ine rudo yechipfuyo, vanobhadharirwa mari dzekurera. Chiitiko ichi chichaita, chikafu, mitambo, mitambo uye imwe-mamaira imbwa dash uko pups inogona kumhanya, kufamba uye kufambisa kuhwina mibairo.
“Chero muridzi wembwa anozviziva kuti anotowedzera kuita kuti zuva redu rive nani. Gore rino, isu kuSubaru takasarudza kudzorera nyasha nezuva rakatsaurirwa kupuruzira uye kunakidzwa nembwanana paSubaru Park," akadaro Alan Bethke, Mutevedzeri Mukuru weMutungamiriri weKushambadzira, Subaru yeAmerica, Inc. "Tinotarisira kune zvinonakidza. zuva neshamwari dzedu - vanhu uye canine - munzvimbo yakakura yePhiladelphia uye kurudzira chero vangangove vanotora imbwa kuti vamire uye vasangane neshamwari itsva yepedyo."
"Zvichienderana nebudiriro kubva kuchirongwa chekugamuchira imbwa pamazuva eMubatanidzwa wemitambo, tinoziva Ita Imbwa's Day Fest ichave yakanakisa kune vanoda imbwa nemhuka dzinovaraidza," akadaro Tim McDermott, Philadelphia Union President. "Sesangano rinofunga nezvenharaunda, zvakakosha kuti isu tiwane nzira dzekudzosera nekuvandudza hupenyu hwembwa nemhuri munharaunda yePhiladelphia."
Ita Imbwa's Day Fest ichaitika paSubaru Park (2502 Seaport Dr. Chester, PA 19013) pakati pe10am. EST uye 4p.m. EST. Vanoda kupinda vanofanirwa kunyoresa vasati vasvika paphiladelphiaunion.com/form/subaru-dog-day-fest.
Chiitiko cheMake a Imbwa's Day Fest chikamu cheiyo automaker's Subaru Loves Pets initiative, iyo yakatsaurirwa kubatsira kutsigira mhuka dzinovaraidza dzinoshaya.
*Kutorwa kwembwa hakugone kuitika pa-saiti kuSubaru Park uye chero munhu anofarira kutora chero imbwa dziri pasaiti anozofanira kuenda kunzvimbo yekugara yesangano remhuka kuti apedzise maitiro ekurera.